ရွာသားလေး: March 2011
ရက်တွေကိုလက်ချိုး အချိန်တွေ ဒီရေတိုးသလို ပြန်ဖို့ကတစ်ရက်နီး တစ်သက်မနီးတော့မယ့် တို့နှစ်ယောက် မင်းတစ်ပေါက် ငါတစ်ပေါက် ငြင်းခုန်ရင်း တစစနဲ့ အမ...
လွမ်းရမှာကြောက်လို့ လမ်းခွကိုရောက်တိုင်း ငါတစ်ယောက်တည်းရှေ့ဆက်သွား ငါ့အမှားလို့လူတွေ အမြဲဆို အကဲပိုလို့ချစ်ခဲ့တုန်းက ငါ့ယုယမှုတွေ ငါ့အ...
ရင်ခုန်သံတိုးတိုးကို ရိုးရိုးလေးဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် နင့်အတွက်နဲ့ အမြဲလှုပ်ခတ်နေတတ်တဲ့အတွက် အသဲလှူပ်မတတ်ချစ်နေတာကို နင်သိဖို့ကော...
ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီ မဲဆွယ်ဗွီဒီယိုမှ အလွဲများ အပိုင်း(၁)
ရွာသားလေး. Powered by Blogger.
ပိတောက်ဝါကိုချစ်တယ် နင့်ကိုလဲချစ်တယ် အချစ်ရယ်
နင့်ဥပေက္ခာတွေ အမုန်းတရားတွေနဲ့ နပမ်းလုံးနေရတဲ့ငါ့မှာ
ပျော်ပါးဖို့ဆိုတာ ရှားပါးတဲ့ကန္တာရ အိုအေစစ်ပါ
ငါ့ဘ၀နေမင်းကြီးကို ရင်ခွင်ပိုက်တဲ့ လောကဟင်းလင်းပြင်လိုပဲ
၃၁.၃.၂၀၁၁ ၁၉း၅၇ (ရုရှား)
မငြူစူပဲ သူချွဲသမျှ အဟုတ်မှတ်ထင်စိတ်ကြီးဝင်ကာ
ငါဟဲ့ချစ်သူ အူတူတူနဲ့ သစ္စာစကားရင်ဝယ်ထားလို့
“က”ရုပ်= ကပြဖျော်ဖြေသော ရုပ်သေးရုပ်…
4:28am (29.3.2011) Russia
ဟိုးတုန်းကတော့ မိန်းမတစ်ယောက်အတွက် စစ်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်..
မယ်သီတာအတွက် ရာမနဲ့ ဒဿ စစ်ဖြစ်တယ်
မမြ၀င်းအတွက် ဦးဘချစ်နဲ့ ဗိုလ်အောင်ဒင်
မဏိစန္ဒာအတွက် အနော်ရထာနဲ့ ကျန်စစ်သား စသဖြင့်ပေါ့…
ငါလည်း မိန်းမတစ်ယောက်အတွက် ဗီလိန်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင် ဖြစ်ခဲ့မယ်…
ဒါပေမယ့် ကျန်စစ်သားလိုငါ့ဘ၀က ချစ်သူကချစ်ခဲ့တဲ့ ဗီလိန်တစ်ယောက်လို့
ယုံကြည်ထားခဲ့သမျှ နင်ကြောင့် တစ်ရက်တည်းကိုပျက်စီးသွားခဲ့တယ်..
ချစ်သူရေ…. နင်သိထားအောင်ပြောလိုက်မယ် …. ငါဗီလိန်တစ်ယောက်ဆိုပေမယ့် သစ္စာရှိခဲ့တယ်..
နင့်အပေါ်မှာ မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားခဲ့တယ်… အသက်ပေးမလောက်ချစ်ခဲ့တယ်…
ဒါပေမယ့် …… ..........
သူတစ်ပါးကို ရန်မရှာဖူး….ခေတ်စကားပြောရင် နင်ရှာထားတဲ့ ဂွင်ကို ငါမဖျက်စီးပါဖူး….
ငါကိုယ်တိုင်ချမှတ် ငါကိုယ်တိုင်လိုက်နာခဲ့တဲ့ စည်းကမ်းတွေကို နင်မချိုးဖောက်ဘဲနေနိုင်တဲ့အခါ
ကိုင်းမြင်တိုင်းနားချင်တဲ့ အပျံသင်စငှက်ငယ်ဘ၀ကို နင်စွန့်လွှတ်နိုင်တဲ့အခါ
နင်ချစ်ခဲ့တာ ငါတစ်ယောက်တည်းလို့ သေချာတဲ့အခါ
ငါ့ရင်ခွင်ကိုပြန်လာခဲ့ပါ….. နင့်အတွက်ငါ့ရင်ခွင်က အမြဲတမ်း Welcomeပါ….
လာချင်ရင်တော့အနီးလေး မလာချင်ရင်တော့ ခရီးဝေးပါတယ်....ချစ်သူ
ငါဟာ ဥယျာဉ်မှူးတစ်ယောက်စိတ်ဓါတ်နဲ့ နင့်ကိုချစ်ခဲ့ချိန်ကစတင်ပြီး နင့်အပေါ်မှာ လေးလေးနက်နက် ဂရုစိုက်ခဲ့တယ်.. ပြုစုယုယကြင်နာ စိတ်ချမ်းသာစေခဲ့ပြီး အရာရာမှာ နင့်တစ်မျက်နှာကိုပဲ မြင်ခဲ့တယ်… နင့်ဆီက အချစ်ဆိုတဲ့ ပန်းကလေးမပွင့်မီအချိန်မှာလဲ ငါ့အချစ်တွေလျော့နည်းမသွားပဲ ဇွဲရှိရှိချစ်ခဲ့တယ်… ဒီလိုနဲ့ နင်ငါ့ကိုချစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တာကို တန်ဖိုးထားယုံကြည်စွာ မြတ်နိုးစွာသိမ်းဆည်းလို့ ဆထက်တပိုး တိုးပြီးချစ်ခဲ့ပါတယ်… ချစ်သူရေ အခုတော့ နင့်အချစ်တွေက ပန်းတစ်ပွင့်လို့ ဝေဆာဖူးပွင့်ချိန်ကျော်လွန်ပြီး ညှိုးနွမ်းကြွေကျသွားပြီလား.. . ငါလုံးဝမျှော်လင့်မထားခဲ့ပါဖူး… အခုတော့ နင်င့ါကိုချစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ …….. နုတ်ဖျားကမုသားတွေလား………………………… ရင်ထဲကစီးကျလာတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ မေတ္တာတရားလား……. ငါစဉ်းစားနေရပြီချစ်သူ…….အခုအချိန်မှာ နင့်ရဲ့မုသားအဆိပ်တွေဟာ ငါ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ ကျွေးခဲ့တဲ့ *ဆေးဖက်ဝင်မုသားအဆိပ်* တွေပဲဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းနေမိပါတော့တယ်…..
*** ဒီကဗျာလေးကို ဘယ်လိုခံစားမိကြမလဲလို့ သိချင်ပါတယ်ဗျာ ... ကျေးဇူးပြုပြီး ထင်မြင်ချက်
Comment လေးတွေချန်ထားပေးပါနော် ***
ပုံများကိုဖတ်ရန်အတွက် (right Click=Open Link in New Tab) လေးနဲ့ဖတ်ကြပါနော်.....
ကမ္ဘာကြီးကို အေးမြမှု အလင်းရောင်ပေးတဲ့
ကြယ်လေးတစ်ပွင့်နေမင်းကြီးတစင်း လမင်းကြီးတစင်း မဖြစ်ပေမယ့်
ဒီကဗျာလေးတွေက ခံစားချက်တွေကို စကားလုံးတွေအဖြစ်ဖန်ဆင်း နှလုံးသားချင်းရင်းနှီးသူနှစ်ယောက် အချင်းချင်းရင်ခုန်သံဖွင့်ပွဲသဘောလေးရေးထားတာပါ……..တစ်ယောက်ကဗျာကို ကြည့်ပြီးနောက်တစ်ယောက်က ဆက်ရေးထားတာပါ.......စဉ်းစားချိန်က မရပါဘူး..တစ်ယောက်ရေးပြီး (၁၀)မိနစ်အတွင်း ကျန်တဲ့တစ်ယောက်က ကဗျာတစ်ပုဒ်အပြီးရေးပါတယ်..... Chat မှာ စကားပြောချိန် တစ်နာရီအတွင်း ဖန်တီးလိုက်တဲ့ ကဗျာလေးတွေပါ....သူတို့နှစ်ယောက်ကချစ်သူတွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် ခံစားချက်ကိုနားလည်ပေးတတ်တဲ့ သူတွေလို့ပြောရမလားဘဲ…… လူတစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ကနားလည်ရခက်ပါတယ်…. ထာဝရသူငယ်ချင်းများက သူငယ်ချင်းတွေကို သူတို့နှစ်ယောက်လို တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် နားလည်မှုနဲ့ အမုန်းမပွားပဲ အဖြူရောင်အချစ်များဖန်ဆင်းနိုင်ပါစေ….
လောက သံသရာ အချစ်ဆိုတာဝင်္ကပါလိုပါဘဲ တစ်ယောက်ကပြေးတော့ တစ်ယောက်ကလိုက်တယ် နှစ်ယောက်လုံးနီးတော့လဲ ဆိုက်ကားပေါ်မှာ ဘေးချင်းယှဉ်နေပြန်တော့လည်း သံလမ်းနှစ်ခုအလား မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆုံတော့လည်း အစုန်အဆန်ရထားဘ၀ အော် ချစ်သူ တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆုံမှတ်က လောကမှာရှာဖွေဆဲပါ
ဆုံမှတ်တွေလွဲနေတဲ့ တို့၂ယောက်ဘဝ.......မုန်းဖို့မေ့ဖို့မဖြစ်နိုင် ရဟတ်ယာဉ်လို လည်နေတယ် ငါကောင်းကင်ကြီးနဲ့နီလားချိန် မင်းက မြေကြီးနားလေးမှာ......မပြောင်းလဲတဲ့ ကံတရားကို အရမ်းမုန်းမိတယ်.......ချစ်ရသူရယ်
ကံဆိုတာအလုပ်တဲ့ တခါတလေ လောကမှာ လုပ်တိုင်းမဖြစ် ညစ်ကျယ်ကျယ် အတွေးတွေနဲ့ စည်းမျဉ်းဆိုတာတွေက တံတိုင်းတွေဆောက်ထားတတ်တယ်လေ ငါကိုယ်တိုင်ရောမစစ်တပ်ကြီးတစ်တပ်ကို ဦးဆောင်နိုင်ပြီး မင်းနဲ့ငါရဲ့ ကြားကတံတိုင်းကို ဖြိုဖျက် မင်းရှိရာအရပ်ကို တစ်စိုက်မတ်မတ်လာမယ် ချစ်သူ မင်းစောင့်မျှော်နေပေးပါ
ရင်ခုန်ခြင်းတွေအပြည်နဲ့ပါ........ချစ်သူ....ထာဝရ........မှတ်တိုင်လေးမှာ စောင့်မျှော်နေမယ့် သူပါ...ယုံကြည်ခြင်းတွေ ရင်ထဲမှာ အရာတစ်ခုကိုမက်မက်မောမော ဆုပ်ကိုင်ထားသလို အချစ်တွေနဲ့ အားကိုးနေသူလေ....ချစ်သူရယ်.....အဲအချိန်ကိုရောက်လာခဲ့ရင် ခွန်အားတွေအပြည့်နဲ့ အရာအားလုံးကို တို့နှစ်ယောက်လက်တွဲလို့ ရင်ဆိုင်ကြရအောင်နော် ချစ်သူ
လောကကို အံတု ဖားတုလို့ခရုခုန်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး မင်းနဲ့ငါဆုံနိုင်ရမယ် ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကို ရင်ထဲမှာထည့်ပြီးကြိုးစာနေချိန်မှာ မင်းအကြောင်းကိုတွေး လွမ်းဆွေးနေရင်းနဲ့ ကဗျာတွေကိုရေးနေမိတယ် "ကိုလေးဖြူဆိုထားတာက တိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိလာတိုင်း ငါလေ အမှတ်တမဲ့မင်းကိုလွမ်းပါတယ်တဲ့" ငါက မင်းကို ထာဝရလွမ်းနေတဲ့သူပါ မင်းနဲ့ငါ ဆုံစည်းတဲ့အခါ မင်းဘ၀အတွက် လူလောကနိဗာန်ဘုံဆိုတာကို ဖန်ဆင်းပြီး မင်းအတွက် အသက်ဆက်ရှေ့ကရပ်တည်နေမယ့်သူဆိုတာ ယုံကြည်နေပေးပါ
ဘဝမှာရရှိတဲ့ အသက်ရှုသံတွေရဲ့တစ်ချက်တိုင်းမှာ မင်းကိုသတိရတယ်ချစ်သူ... တို့နှစ်ယောက်စိတ်ကောက်ဖူးကြတယ်.........နည်းမျိူးစုံနဲ့ရန်ဖြစ်ဖူးတယ်..... အလွမ်းတွေပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးသလို မျက်ရည်စတွေလည်းကျခဲ့တယ်......... အချစ်ကိုအရမ်းမုန်းမိတဲ့ငါက အချစ်အကြောင်းကို မင်းကြောင့် ဖွဲ့နွဲ့တတ်လာပီ.....တို့နှစ်ယောက်ဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့ ဘဝလေးတွေကြားမှာ မြတ်နိုးခဲ့ကြပေမဲ့ အချစ်လမ်းလေးကို တို့တွေ အတူလျှောက်နိုင်အောင် မျှော်လင့်ချက်လေးတွေနဲ့ တမ်းတရင်း သာယာတဲ့ ပန်းခင်းလမ်းမှာ ဆုံပါရစေလားကွယ်။
တို့တွေဝေးနေတယ် ဆွေးနေတယ် ဒါပေမယ့်ချစ်သူ တို့နှစ်ယောက်ရင်ထဲမှာ အချစ်ဆိုတဲ့ ခိုင်မာတဲ့ နှောင်ကြိုးတစ်ခုနဲ့ ခွန်အားတွေရရှိ တို့တွေချင်းနီးစပ်မှုကိုရရှိစေတယ် ... ဝေးကာနေတဲ့နယ်နမိတ်တွေကို ငါတို့နှစ်ယောက် အချစ်ကို သာ လမ်းခင်းလိုက်ရင် မင်းနဲ့ငါကြားမှာရှိနေတဲ့အကွာအဝေးက ဆံချည်မျှင်ထက်ပိုသေးငယ်တယ်ဆိုတာကို ချစ်သူသိနေမှာပါ နေရိပ်ဖို့အတွက်စောင့်ရတာနေပူတော့နည်းနည်မိမှာပါချစ်သူ ခရောင်းလမ်းကို အချောသတ်လို့ မင်းနဲ့ငါ့ရဲ့ ပန်းခင်းလမ်းကို ငါကိုယ်တိုင်ဖောက်လုပ်နေတယ် ချစ်သူ
ချစ်ရသူရယ်........တို့တွေအသက်ထက်မက အရာအားလုံးကိုစွန့်လွှတ်ပြီး ချစ်နေကြတဲ့ချစ်သူတွေ......ပန်းခင်းလမ်းကို နှစ်ယောက်တူတူတည်ဆောက်ပါရစေလား .....နောက်ဆုံး ဖြစ်နိုင်ရင်လေ ဘေးနားက ရေလေးခပ်တိုက်ပေးနေတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်....ပင်ပန်းခြင်းတွေမျှဝေလို့ လွတ်လပ်စွာနဲ့ အနာဂတ်ကို အချစ်တွေ နားလည်မှုတွေနဲ့ တည်ဆောက်ပါရစေချစ်သူ။
လွမ်းမိပါတယ်.....မျက်ဝန်းမှာမျက်ရည်စလေးတွေနဲ့..........လွမ်းမိပါတယ်...ကြင်နာသူအသံလေးကို......လွမ်းမိပါတယ်.....ချစ်ရသူ၏ အပြောကောင်းတဲ့စကားလုံးလေးတွေ......လွမ်းမိပါတယ်......တောက်ပနေတဲ့ မြတ်နိုးသူရဲ့ အကြည့်လေးတွေ.......ရှင်ရယ် ရင်ခွင်မှာငိုကြွေးနေမိတယ်.....အလွမ်းတွေ ဆယ်သက် မကုန်နိုင်အောင် အလိုလိုရနေတယ်....ချစ်ရသူရှင့်ကို.....စက္ကန့်နဲ့အမျှ တမ်းတနေတဲ့ ကျွန်မအဖို့ ဘယ်ချိန်မှ ပျော်ရွင်ခြင်းတွေကိုရမလဲ မျှော်နေမိတယ်
ချစ်သူ အလွမ်းတွေကို စားသုံးကုန်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးဝင်မယ်ဆို မင်းနဲ့ငါ့ အလွမ်းဟာ နတ်သုဒ္ဓါထက် အရသာရှိမယ်ဆိုတာကို ငါယုံကြည်ပါတယ် ငါ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ လည်ပတ်နေတဲ့သွေးတစ်စက်ချင်းမှာ မင်းကိုလွမ်းတဲ့ အငွေ့အသက်က ရာနှုန်းပြည့်ပါဝင်နေတဲ့အတွက် အခုဆို ငါ စူးဆူးမှာကိုကြောက်တတ်နေဘီချစ်သူ ငါ့ဆီကသွေးတစ်စက်ဆုံးရှုံးမှုဟာ ငါ့ဘ၀အတွက် အရေးကြီးတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါဘဲ မင်းကို လွမ်းတဲ့အလွမ်း ငါဘယ်လိုမှ လျော့နည်းမသွားချင်ဘူး ချစ်သူ
ကိုရမ်ကျမ်းစာရယ် ပိဋကတ်သုံးပုံရယ် ပညက်တော်ကြီးတွေရယ် အများကြီးကို ငါမသိချင်ပါဘူးချစ်သူ ငါသိချင်တာ မင်းငါလွမ်းနေသလို လွမ်းနေမလား ဆိုတာလေးကို သဲကန္တာရမှာ ရေငတ်နေတဲ့ လူတစ်ယောက် အိုအေစစ်ကို တမ်းတသလို မက်မောတောင့်တစွာ မျှော်လင့်နေမိတယ် ချစ်သူ ....ချစ်သူ ငါ့အလွမ်းတွေကို လှေကားတစ်စင်းဆောက်နိုင်ရင် ကောင်းကင်ကိုဖောက် စကြာဝဠာအပြင်ဘက်ထိ မင်းလမ်းထွက်လျှောက်လို့ရတယ်ချစ်သူ မင်းနှလုံးသားနဲ့ မြင်ကြည့်ပေးပါ
ငါရောက်နေတာ နေမင်းကြီးအနီးမှာဖြစ်နေလို့ ပူလောင်နေမယ်မထင်ပါနဲ့ ဘေးမှာ မင်းရှိနေတဲ့အတွက် အေးမြလတ်ဆတ်နေမှာပါ……. ငါ ၀င်ရိုးစွန်းရေခဲပြင်မှာရောက်နေလို့ အရမ်းအေးနေမယ် မထင်ပါနဲ့ မင်းဆီကနွေးထွေတဲ့အငွေ့အသက်တွေရနေမှာပါ….. ငါ ဘယ်လို အခက်အခဲရှိရှိ မင်းသာဘေးနားမှာရှိမယ် ဆို….. ငါ့ဘ၀က ထာဝရလန်းဆန်းစွာ ပွင့်ဖူးနေတဲ့ ပန်းခင်းကြီးလို………….. ထာဝရအေးမြစွာ စီးဆင်နေတဲ့ စမ်းချောင်းတစ်ခုလို…. အရာရာပြည့်စုံစွာလှပ ရှင်သန်နေမှာပါ……
(အခုတော့လဲ အရမ်းကိုချစ်တဲ့ နားလည်မှူရှိတဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြပါပြီ.)
နေရာတွေလွဲလို့ Online ကပဲတို့တွေ့ခဲ့ရတယ်………
(နင့်ကို မသိစိတ်က ချစ်မိသွားတယ်ဆိုတာကို မသိပဲ ရင်ထဲကထွက်ကျလာတဲ့ ကဗျာလေး)
သူငယ်ချင်းများထံမှ Comment များနှင့်ဖြစ်စေ Mail ပို့၍ဖြစ်စေ ဝေဖန်မှူများကို မျှော်လင့်နေပါသည် ....
ပျံသန်းရင်းစီးမျော အလွမ်းသဘောကို မသိသောသူဖြစ်ပါစေသား